Thokozela umculo we-Jazz | News24
Thokozela umculo we-Jazz
ISITHOMBE: SITHUNYELWE Abanye babaculi abadumile abadlala kule ndawo
ABAPHATHI be-The Rainbow bachaza le ndawo njengenye yezindawo ezidumile lapho kubuthana khona abaculi bohlobo lomculo we-Jazz bakuleli.
Le ndawo yobumnandi iqoqa bonke abaculi, ukuthi bathokozise abathandi be-Jazz kubalwa uBusi Mhlongo noElias S’dumo Ngidi abaziwa kakhulu ngohlobo lomculo owaziwa ngokhuthi yi-Afro Jazz.
I-Rainbow Restaurant yasungulwa nguMnuz Ben Pretorius noMnuz Billy Mthembu,ngo-1981 kuZibandlela (December) ngezikhathi ezazinzima kakhulu eNingizimu Afrika, kusanobandlululo olwalubhekiswe esizweni esimnyama.
Ngokusho kuka Nkk Nicole Comfort, ongomunye wabaphathi bale ndawo, uthe le ndawo kwaba ngeyokuqala KwaZulu-Natal ukuthola igunya lokudayisa ukudla notshwala kubantu abamnyama.
Uqhube wathi umlando waku lendawo ujule kakhulu njengoba kwakuba yindawo yemihlangano yamaqabane ayelwa nobandlululo.
Ngo-1983 le ndawo yaba ne khonsathi yayo yokuqala lapho kwakudlala abaculi uPhilip Thabane noMalombo.
Baningi abaculi abakuleli ebanandisa kule ndawo, futhi abanye babo bakhulise amathalente abo kuyo.
Ekuhambeni kwesikhathi, le ndawo yathandwa ngabezinye izizwe, ngenxa yomculo nabaculi abanandisa kule ndawo.
Ngo-1987 i-Rainbow Restaurant yaba nomcimbi wokuzalwa kwaloyo owayenguMengameli uDkt Nelson Mandela, ngesikhathi egubha iminyaka engama-70.
UNkk Comfort uqhube wathi ngesikhathi iNingizimu Afrika ithola inkululeko ngo-1994, uBilly Mthembu wadlulisela izintambo kuMnuz Ben Pretorius, owalibhekisa emazweni ase-Afrika nomkakhe, wabuya emva konyaka, wasungula ama-project amabili aziwa ngokuthi yi-The Rainbat project ne-BAT Centre.
Ngo-1995 uMnuz Neil Comfort waba yingxenye ye-The Rainbow Restaurant , kwathi ngo-2001 kwenziwa indumezulu yomcimbi wokugubha iminyaka engama-50 kaMnuz Pistoruius.
UMnuz Comfort uthe: “Baningi abaculi abadumile asebeke babayingxenye yaku lendawo, okumnandi wukuthi abathandi bomculo we-Jazz bahlezi bethokozela umculo esiwudlala kule ndawo, ngakho simema bonke abathandi bomculo we-Jazz ukuthi basivakashele ukuze bezwe umculo omnandi,” kusho yena.
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngemicimbi elandelayo eThe Rainbow shayela inombolo ethi: 031 702 9161
Ngo-1983 le ndawo yaba ne khonsathi yayo yokuqala lapho kwakudlala abaculi uPhilip Thabane noMalombo